यस्ता बिरामीले गुर्जोको प्रयोग गर्दै नगर्नुहोला,ठाडै ढलाउन सक्छ।प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तरिका हेर्नुहोस।यस्ता छन् चेतावनीमुलक तथ्य गुर्जोको बारेमा « गोर्खाली खबर डटकम
मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुर्जो नेपालका जहाँसुकै रोप्न सकिने अमूल्य जडिबुटी हो । नेपालमा धेरै ठाउँमा घर वरिपरि वा गमलामा रोपेर नियमित प्रयोग गर्न सकिने लहरे जडिबुटी गुर्जो, यसले अमृत समान काम गर्दछ भनिन्छ । यसको लहरा लामो समयसम्म सुक्दैन ।यसको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर खान नसक्दा शरीरलाई बेफाईदा गर्छ ।
कस्ता मानिसले सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु=१. चिसो लागेको र संवेदनसिल तथा कमजोर (जीर्ण) अवस्थाका विरामीले उमालेर छानेर सेवन गर्नु पर्दछ।२. प्रेसर लो छ भने हरियो बोक्रा फालेर मह, मिश्री, सखर वा विरेनुन मिलाएर आधा मात्रा खाने ।३. गर्भवती, दुधपान गराइरहेका आमा, ५ बर्ष मुनिका बच्चा, पखाला लागेका विरामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन ।यस्ता बिधी अपनाएर मात्र सेवन गर्नुहोला।
१० गुर्जो इम्युन पावर बढाउन अत्यन्तै उपयोगी छ । त्यसैले गुर्जोले कोरोना, स्वाइन फ्लु, वर्ड फ्लु, डेंगु , भाइरस, जिवाणु किटाणु तथा विषाणुहरुलाई समेत रोक्ने साथै लड्ने क्षमता बढाउँदछ । ११ उच्च रक्तचापको रोगीलाई पनि यसले धेरै फाइदा पुऱ्याउँदछ ।१२ गुर्जोको प्रयोगले मुटुलाई बलियो बनाई मुटु सम्बन्धि रोगमा फाइदा गर्दछ ।